အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ပြည်သူလူထုကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ ဖမ်းဆီးနေသည့် တန့်ဆည်မြို့တွင် ဈေးဝယ် သွားသော အမျိုးသမီးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံး - Myanmar Pressphoto Agency
MPA December 5, 20212min read
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တန့်ဆည်မြို့နယ် ကုန်းအိုင်ကျေးရွာနေ အမျိုးသမီး ၂ ဦးမှာ ဒီဇင်ဘာ၂ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ဈေးဝယ်ရန်ထွက်ရန် ထွက်သွားရာမှ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အိမ်သို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိလာသော မချိုဇင်ဦး၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မယဉ်မွန်နှင့်အတူ ဈေးဝယ်ထွက်ရန် အတွက် ဒီဇင်ဘာလ၂ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ထွက်သွားပြီးနောက် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
မချိုဇင်ဦးနှင့် မယဉ်မွန်တို့ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွားသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သော် လည်း မိသားစုဝင်များအနေဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
လက်တလောတွင် တန့်ဆည်မြို့နယ်အတွင်း၌ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က တပ်စွဲထားပြီး စစ်အင်အား အများအပြားဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း များလည်း ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူလူထုကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ ဖမ်းဆီးနေရာ အသားမည်းလျင် ကြက်ပေါင်ဖိနပ်များစီးထားလျင်ပင် ဖမ်းဆီးနေသကဲ့သို့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတွင် လူနှစ်ဦးစီးနင်းခြင်းများ တွေ့ရှိလျင်လည်း ဖမ်းဆီးနေကြောင်း ဒေသခံ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကပြောသည်။
မချိုဇင်ဦး၏မိသားစုဝင်တစ်ဦးက”အရမ်းကို စိုးရိမ်တယ်ဗျာ။ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးရော အသက်အန္တရာယ်ကိုရောပါ စိုးရိမ်တယ်ဗျ။ စစ်ကောင်စီကဖမ်းလား။ သူခိုးဓါးပြတွေက ဖမ်းထားတာလား။ အခြားပုံစံမျိုးနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေသလား အရမ်းစိုးရိမ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
“ထွက်သွားတုန်းကတော့ ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ပြောတယ်။ထွက်ဖို့သွားတော့ နေ့လယ်၂နာရီခွဲမှာ သူ့ဆီ အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ ဆက်တဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းဆက်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒီနေ့အထိ အဆက်အသွယ်မရတော့ဘူး” ဟုမယဉ်မွန်၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးကဆိုသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် ဒေသခံကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များအကြား ပစ်ခတ်မှုများလည်း ရှိနေရာ ပျောက်ဆုံးနေသူ နှစ်ဦး၏ လုံခြုံရေးအတွက် မိသားစုများက စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။
#အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က #ပြည်သူလူထုကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီး #တန့်ဆည်မြို့တွင်ဈေးဝယ် သွားသောမျိုးသမီးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံး #MPA
Two Women Gone Missing in Taze where Terrorist Military is Arresting People in Various Ways
Two women who were going shopping on the afternoon of December2in Sagaing region’s Taze township went missing.
Ma Yin Mon and Ma Cho Zin Oo who was visiting her friend at the time went for shopping on December 2nd in the afternoon and they had lost contact since.
Although news emerged that Ma Cho Zin Oo and Ma Yin Mon were arrested by the military, the families could not confirm.
Currently, the terrorist military has takenabase in Taze township and are carrying out heavy checks and arrests.
They are arresting people on all sorts of reasons; they even arrest if one with black complexion wears thongs and also if two persons ride on one motorbike, local defense forces say.
Family of Ma Cho Zin Oo said, “We’re extremely worried. We’re both concerned about their safety as they’re both women and also for their life. Are they arrested by the SAC? Or by robbers? Or are they in trouble in any other form?”
“When they left, they said it was for shopping. When I called by 2:30 in the afternoon foramatter, the call didn’t work anymore. We haven’t had contact till today”, saidafamily member of Ma Yin Mon.
As there are fights between the terrorist military and local defense forces, the families are concerned for the safety of the missing two.
#TerroristMilitary #ArrestthePeopleonVariousReasons #TwoWomenShoppinginTazeGoneMissing #MPA
Tags: ChoZinOo MPA SagaingRegion Taze Women YinMon
Previous: တမခ ၂၂ က ချင်းပြည်နယ်တွင် စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ မုဒိမ်းမှု နှစ်ခု ကျူးလွန်